Telecom's 4G does not work on mobile phones made in India, what is reality ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
शुक्रबार, चैत्र २७, २०७७ २२:५१
भारतमा बनेका मोबाइलमा टेलिकमको फोरजी नचल्ने, के हो वास्तविकता ?
काठमाडौं । केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा बाेल्दै नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारीले भारतमा बनेका मोबाइल खरिद नगर्न आग्रह गरे ।
नेपाल टेलिकमले हाल ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा ८०० मेगाहर्ज फ्रक्वेन्सीमा आधारित फोरजी सेवा विस्तार गरिरहेको छ । यस्तो फ्रिक्वेन्सीमा आधारित बीटीएस टावरले लामो दूरीमा नेटवर्क पुर्‍याउन सक्छ । तर भारतमा बन्ने मोबाइलहरुले भने ८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीलाई सपोर्ट गर्दैनन् ।
‘भारतमा फोरजीका लागि ८०० मेगाहर्जको फ्रक्वेन्सी नै प्रयोग हुँदैन,’ प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले भने, ‘यसैले भारतमा बन्ने मोबाइलमा हाम्रो ८०० मेगाहर्जमा आधारित नेटवर्कको सपोर्ट हुँदैन । यस्तो अवस्थामा भारतमा बनेका स्मार्टफोनमा हाम्रो फोरजी नचल्ने अवस्था छ ।’
दूरसञ्चार उपकरण आयात ह्वात्तै बढ्यो, चैतसम्म २६ अर्ब बढीको उपकरण भित्रियो
काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरण तथा पार्टपूर्जाको आयात उल्लेख्य बढेको छ । नेपाल
काठमाडौं । तपाईंले प्रयोग गरिरहेको सिमकार्डमा अरु कसैले पहुँच बनाएर तपाईंको सामाजिक सञ्जालदेखि बैंकिङ अकाउन्टसम्म
काठमाडौं । स्मार्ट सेलले ग्राहकका लागि रिचार्जमा आकर्षक बोनस दिने भएको छ । फोरजी ग्राहकलाई
काठमाडाैं । नेपालले आफ्नै भू-उपग्रह राख्नका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रियामा परामर्श सेवा दिन चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले